Bixiye, waa calaamad ILS ah
Bixiye, waa calaamad ILS ah 1 bishii 1 toddobaadkii ago #1831
Magacaygu waa Achim waxaanan ka imid Munich. In kabadan 30 sano waxaan isticmaalayaa duulimaadka sims, hore FSX, maanta P3d.
Markaan yeelanayo qoys aan badiyaa duulimaadyo gaagaaban, kuwa aan ugu jeclahay waa dhul-sidayaal xamuul. Waxaan dhawaan rakibay P3d v4.5 hf3 oo ay weheliso nooca ugu dambeeyay ee gawaarida gawaarida. Nasiib darrose ma jiro calaamadaha ILS-ka T-45C Goshawk. Marka waxaan isku dayay garoon diyaaradeed (EDMA) iyo habka loo maro "ILS" in sifiicanba ay u shaqeeyaan. Ma jiraa qof aqoon u leh arrintan? Waxaan si weyn ugu mahadcelinayaa qaar ka mid ah talooyinka sida loo helo habka loo yaqaan 'ILS system' ee ka shaqeeya dariilooyinka side iyadoon la adeegsan TacPack.
Aad baad u mahadsantahay iyo